Apụghị mbubata MP4 n'ime Final Cut Pro? Kpebiworo
> Resource> FCP> Ike mbubata MP4 n'ime Final Cut Pro? Kpebiworo
Na-eme ikpeazụ ịkpụ pro nkwado MP4? N'ezie, ọ bụ kwuru na Final Cut Pro-akwado MP4, H.264, DV, HDV, 3GP, wdg Ọ bụrụ na i nwere ike na-adịghị njikere na dezie MP4 faịlụ na Final Cut Pro, ọ pụrụ ịbụ na usoro codec nke. Iji dozie nsogbu gị, ị mkpa ịchọta ngwá ọrụ dị ike nke na-haziri karịsịa maka Final Cut Pro.
Part 1: Best MP4 ka Final Cut Pro Ntụgharị
Part 2: Free MP4 ka Final Cut Pro Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online MP4 ka Final Cut Pro Ntụgharị
Tọghata MP4 ka Final Cut Pro na iMovie na ala codecs dị ka ProRes, Apple Intermediate Codec na DNxHD.
Tọghata MP4 ma ọ bụ site ọ bụla usoro gụnyere MOV, MKV, AVI, na ọbụna 3D & HD videos.
Ọkụ videos ọ bụla usoro DVD na ọtụtụ wuru na-menu ndebiri.
Tọghata videos na 30 X ngwa ngwa ọsọ na ZERO àgwà ọnwụ
Akwado os: Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6, Windows 8/7 / XP / Vista
Olee otú iji tọghata videos na nke a MP4 ka Final Cut Pro Ntụgharị
The nkuzi n'okpuru dabeere Mac OS (Yosemite gụnyere). Ọ bụrụ na ị chọrọ a video Ntụgharị maka Windows (Windows 10 gụnyere), dị nnọọ pịa ebe a.
1. Tinye MP4 videos
Na-agba ọsọ a MP4 ka FCP Ntụgharị. Pịa "File"> "Ibu Ibu Media faịlụ ..." menu Ibu Ibu gị MP4 videos ma ọ bụ ozugbo ịdọrọ na dobe gị obodo MP4 faịlụ n'ime nke a ngwa si ebi ndụ. Mgbe importing ịga nke ọma, i nwere ike ihuchalu MP4 videos site na ịpị video thumbnails, ma ọ bụ re-ndokwa ndị a vidiyo site kpamkpam adọkpụpụta lekwasịrị video ebe ị chọrọ.
Cheta na: Ọ bụrụ na gị faịlụ na-segmented na ị chọrọ ikpokọta ha ọnụ n'ime a nnukwu onye n'ihu gị mbubata faịlụ n'ime FCP, n'oge a, i nwere ike ịgbanwee na "jikota" mgba ọkụ na ala. Ozugbo, a ga-enwe agbụ n'etiti abụọ ọ bụla videos.
2. Họrọ FCP dị ka mmepụta format
A na ngwa awade gị kachasị usoro maka FCP na ya format window, nakwa dị ka ProRes, Apple Intermediate Codec na DNxHD nhọrọ. Ebe a, ị nwere ike na-ahọrọ kachasị preset dị ka mmepụta usoro. N'ezie, ị nwere ike họrọ a ala codec encode gị faịlụ edezi na FCP.
Dị nnọọ pịa ala akụ bọtịnụ na ala nke a na ebi ndụ-emeghe ya mmepụta format window. Mgbe ahụ, na-aga "edezi" Atiya> "Final Cut Pro" ma ọ bụ họrọ onye ọ bụla n'ime ProRes, Apple Intermediate Codec na DNxHDthe nhọrọ.
3. Malite MP4 ka FCP akakabarede
Mgbe e mere ihe nile, pịa "tọghata" button na ala-nri akuku rụchaa akakabarede. Mgbe ị na-eche, nwere kọfị ma ọ bụ na-a ụra ka Video Ntụgharị na-arụ ọrụ na ndabere. Mgbe akakabarede, nke a ngwa na akara ngosi ga na-jumping na n'ọdụ ụgbọ mmiri.
Ugbu a, ị nwere ike mbubata mmepụta faịlụ ka Final Cut Pro dezie enweghị ihe ọ bụla nsogbu. Na mmepụta video agaghị ibelata na video mma. Na mmepụta ụzọ esesịn depụtara na ala nke isi interface. Ị nwere ike ngwa ngwa na n'ụzọ dị mfe ịhụ mmepụta faịlụ dị ka faịlụ ụzọ. N'ezie, i nwere ike ịgbanwe faịlụ ụzọ site onwe gị bụrụ na mkpa.
Video Tutorial: Olee otú iji tọghata MP4 ka Final Cut Pro na Video Converter Ultimate
# 1. Free Video Ntụgharị: Wondershare Free MP4 Ntụgharị
Na nke a free video Ntụgharị maka Final Cut Pro, ị nwere ike mfe mbubata MP4 ka Final Cut Pro.
Pro: Free, ọ dịghị mmezi ụgwọ, kensinammuo interface
1. Ọ dịghị ihe presets maka Final Cut Pro. Ị nwere ike ghara tọghata ozugbo na FCP.
2. Ị mkpa ịkpachara anya banyere mmepụta video mma.
3. Ọ na-adịghị ka ị ọkụ DVD.
Cheta na: Chọrọ dozie gị video incompatibility nke rụọ ọrụ nke ọma na n'ụzọ dị irè? Na-agbalị nnọọ Video Converter Ultimate.
Olee otú Ọkụ (YouTube) MP4 ka iDVD on Mac OS X
Olee otú iji tọghata MTS ka MOV na Mac OS X odum / Windows
Olee otú iji tọghata MP4 ka QuickTime MOV